Abahlinzeki be-Acidity Regulators nabahlinzeki | I-China Acidity Regulators Abakhiqizi
I-Fumaric acid, eyaziwa nangokuthi i-fumaric acid, i-fumaric acid, i-purpuric acid noma i-lichenic acid, iyi-crystal engenambala, evuthayo, i-carboxylic acid etholakala ku-butene. I-Fumaric acid inambitheka njengezithelo futhi ingatholakala eCorydalis, Boletus, Lichen nase-Icelandic seaweed. Ukupakisha: 1kg / isikhwama, 25kgs / isigubhu (Amaplastiki amabili ngaphakathi kanye nePhepha-imigqomo noma izidingo zamakhasimende.) Isitoreji: Gcina ezitsheni eziqinile, ezingangeni ukukhanya, gwema ukuvezwa yilanga eliqondile, umswakama nokushisa okweqile. Igobolondo ...
I-Malic acid iyinhlanganisela ephilayo nefomula yamangqamuzana C4H6O5. Inikela ekunambithekeni okumnandi okumnandi kwezithelo, futhi isetshenziswa njengesengezo sokudla. I-Malic acid inezinhlobo ezimbili ze-stereoisomeric (L- ne-D-enantiomers), yize kuphela i-L-isomer ekhona ngokwemvelo. IMalic Acid ine-hygroscopic eqinile, encibilikayo emanzini nase-ethanol. Kukhona i-asidi ekhethekile emnandi. Ukunambitheka kwe-1.Malic Acid kuseduze nama-apula emvelo omuncu, uma kuqhathaniswa ne-citric acid, ne-asidi, ukunambitheka nokuthamba, indawo yokuhlala ende ...
I-Acidity Regulator BP98 Ibanga le-Crystalline Powder 99% min Sodium Citrate
Usayizi wezinhlayiyana: 12-40mesh, 30- 100mesh grade grade BP98 / usp Packing: 25kg / bag Shelf life: 2 years Packaging & Shipping Packaging: 25kg / bag, 25mt / 20'FCL Lead Time: 10 days after getting prement Sodium citrate is isetshenziselwa ukuthuthukisa ukunambitheka nokugcina ukusimama kwezithako ezisebenzayo ekudleni nasekuphuzeni embonini yokuhlanza, ingathatha indawo ye-Sodium tripolyphosphate njengohlobo lwensipho ephephile engasetshenziswa inhlaba ekuvutsheni, emjoveni, ekuthatheni izithombe nasekufakeni izinsimbi. (1) Embonini yokudla: ...
I-Tartaric acid iyi-crystalline organic acid emhlophe eyenzeka ngokwemvelo ezitshalweni eziningi, ikakhulukazi kumagilebhisi. Usawoti wayo, i-potassium bitartrate, eyaziwa kakhulu ngokuthi ukhilimu we-tartar, ikhula ngokwemvelo ngenkathi kwenziwa iwayini. Ijwayele ukuxutshwa ne-bicarbonate ye-sodium futhi ithengiswa njenge-powder yokubhaka esetshenziswa njenge-agent evuselelayo lapho kulungiswa ukudla. I-asidi uqobo lwayo ifakwa ekudleni njenge-antioxidant futhi inikeze ukunambitheka kwayo okwehlukile okumuncu. Ukupakisha & Ukuthumela Ukupakisha: 25kg / isikhwama, 20mt / 20 & ...
IGlycine (esifushanisiwe iGly) yaziwa nangokuthi i-amino-acetic acid. Ifomula yayo yamakhemikhali i-C2H5NO2, emhlophe okuqinile ekamelweni lokushisa kanye nengcindezi. I-amino acid enesakhiwo esilula kakhulu ochungechungeni lwama-amino acid futhi ayidingekile emzimbeni womuntu. IGlycine uhlobo lwama-amino acid angabalulekile emzimbeni womuntu.Izifinyezo zegama: I-Gly iyisakhiwo esilula kakhulu se-amino acid, umzimba awudingeki i-amino acid, womabili amaqembu ane-asidi futhi ayisisekelo asebenzayo ku-molecule, ca ...
I-Citric Acid Monohydrate / Citric Acid Anhydrous
I-Citric Acid isetshenziswa kakhulu njenge-flavouring agent, i-preservative yezimboni zokudla neziphuzo. Ingasetshenziswa futhi njenge-antioxidant, plasticizer, okokuhlanza kumakhemikhali, izimonyo nezimboni zokuhlanza. Njengesengezo sokudla, iCitric Acid Monohydrate iyisithako sokudla esibalulekile ekunikezelweni kokudla. Njengezithasiselo ezihola phambili zokudla kanye nomhlinzeki wezithako zokudla eChina, singakunikeza ikhwalithi ephezulu yeCitric Acid Monohydrate. 9.Storage and Transport: Kufanele igcinwe endaweni eyomile neyomshini womoya ...